पाँचदलीय गठबन्धन भित्र खटपट, ओलीले देखेको 'असारको खड्गो' टर्ला ? -3ghumti
पाँचदलीय गठबन्धन भित्र खटपट, ओलीले देखेको...
पाँचदलीय गठबन्धन भित्र खटपट, ओलीले देखेको 'असारको खड्गो' टर्ला ?
बैशाख २७, २०७९ मंगलवार ०९:३९ बजे
काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन फेरि खटपट सुरु भएको छ । यस अघि अमेरिकी सहयोेग एमसीसीका विषयमा देखिएको खटपट अन्तत: एमसीसी पास गर्ने भएपछि एकाएक सेलाएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन भित्र फेरि चुनावी तालमेलका विषयमा खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धनका स्थानीय कार्यकर्तामा देखिएको बेमेल यति बेला शीर्ष नेताहरूबीच पनि देखिन थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार कैलालीको धनगढी पुगेर कांग्रेसबाट निर्वाचनमा धोका हुन सक्ने चेतावनी नै दिए । उनले गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका आफ्ना उम्मेदवारलाई भोटसम्म मागे ।
निर्वाचनको सङ्‍घारमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्न बल गर्ने नेताबाटै यस्तो चेतावनी आउनुको अर्थ गठबन्धनमा भित्रभित्रै आगो सल्किरहेको छ । उक्त सल्किरहेको आगो लुकाउन शीर्ष नेताबीच संवाद भइराखेको भएपनि कार्यकर्ता मनाउन समेत उनीहरुलाई समस्या परिरहेको छ ।
प्रचण्ड राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा तालमेल हुँदा जित हात परेपछि हौसिएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल हुँदा प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई पराजित गर्न सकिने उनको हिसाब थियो । तर, एमाले अझ सशक्त बन्दै गएपछि यतिबेला उनीहरु आत्तिएका छन् । अझ माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै केही उम्मेदवारहरु नै एमालेमै प्रवेश गरेपछि गठबन्धन अत्तालिएको छ ।
गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि तालमेल गर्दा एमालेलाई कमजोर पार्न सकिने निष्कर्षमा थिए ।
सोही कारण १७ चैतमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेर अघि बढे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा तालमेल नै सम्भव भएन । तालमेल भएकामा पनि कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी पर्‍यो। बागी उम्मेवदारीकै कारण चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा जित चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
उनको असन्तुष्टि भने कांग्रेस र माओवादीप्रति लक्षित थियो । उनले इलाममा भनेका थिए, ‘गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत तालमेल भयो ।’
तैपनि गठबन्धनबाट भने अलग हुन भने नचाहेको बताए । तर, तालमेलबारे भने समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
२३ वैशाखमा काठमाडौंको रत्‍नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा पाँच दलको संयुक्त चुनावी सभामा सोही दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि तालमेललाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्‍घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई संयुक्त चुनावी सभामा सहभागी नै भएका छैनन् । उनीहरू सहभागी नहुनुको अर्थ तालमेललाई लिएर उनीहरू पनि खुसी छैनन् । यसैगरी कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पनि गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट छन् । उनी कांग्रेसले गठबन्धनको नाउँमा गलत गर्दै गएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यसरी गठबन्धनकै चार दलका शीर्ष नेताहरूबाटै निर्वाचन हुन तीन दिन बाँकी छँदा मुख्य रूपमा कांग्रेसप्रति प्रश्‍न गरिरहनु अर्थपूर्ण छ । फेरि, यहीबेला प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘१७ असार’लाई गठबन्धन भत्किने ‘डेटलाइन’ तोकिदिएका छन् ।
हुन त कांग्रेस महामन्त्री विश्‍वप्रकाश शर्माले गृहजिल्ला झापाको धुलाबारीमा पुगेर कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको योगदान धेरै रहेको चर्चा गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्‍नुमा प्रचण्डको धेरै योगदान छ, त्योभन्दा पनि बढी योगदान नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको छ।’
गठबन्धनका बढेको असन्तुष्टि कै कारण कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसका धेरै नेता कार्यकर्ताले पार्टी नै परित्याग गरेका छन् । चुनावको मुखमा गठबन्धन भित्र देखिएको असन्तुष्टि र खटपटले गठबन्धनको भविष्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले त गठबन्धनको आयू छोटिँदै गएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आउने असारसम्म गठबन्धन भित्र ठूलो खड्गो रहेको उनको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा केही उलटपुलट हुनसक्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।